I-China Readymade Vertical Blind Exortsers kanye neNkampani | I-ETEX
Ama-vert Blinds yimikhiqizo yendabuko evikela kakhulu iwindi. Its ngomsebenzi wokuhlunga okukhanyayo nokulungiswa. Ngokusekelwe ezinhlobonhlobo zemiklamo yendwangu yokwakha, i-Vertical Blind iyindlela ekhetheke kakhulu futhi elula ukufanisa isidingo sakho.
Indwangu: 100% Polyester
Ububanzi: 89/100 / 127mm Vane
Isistimu: Umzila weChain / Wand
Ukuqanjwa kwendwangu: I-Plain, iJacquard, iBlackout, i-FR ..
I-Aluminium: I-Narrow, Square, High, Low track
Izimpumputhe zethu zibheke ukuqeda igumbi. Basiza ukugcina ubumfihlo, balawula amazinga okushisa, futhi bamise ukukhanya okukhanyayo ekungeneni egumbini. Eqinisweni, izimpumputhe zethu ezimnyama ezibheke phezulu zilungele amagumbi okulala lapho ilanga lasehlobo lingakuvusa ekuseni, noma umise abancane ukuba balale ebusuku.
Izimpumputhe ezingabonakali ziyindlela enhle yokugcina indawo futhi zakha imigqa ehlanzekile, yesimanje kunoma yiliphi igumbi. Izimpumputhe zethu zibheke eza tones zemvelo ezahlukahlukene ukuze zihlangane ngaphandle komthungo nokungakhethi kwakho okungaphakathi ngenkathi kufakwa isiphetho esimnandi ewindini lakho. Izimpumputhe eziqonde mpo zithandwa kakhulu njengamanje, kanjalo nama-blind vertical white. Le mibala engathathi hlangothi isebenza kahle cishe kunoma yisiphi isimo futhi nganoma yisiphi isitayela sokuhlobisa.
Ilungele uhla olubanzi lwezitayela zewindows, kusuka kumawindi ajwayelekile kuya eminyango ye-patio namafasitela aseFrance, izimpumputhe zethu eziqondile ezinamatshe ziza ngobubanzi obuhlukahlukene namaconsi. Noma ngabe kungokwalondawo yakho, noma ufuna izimpumputhe zibheke ngewindi le-bay, uqinisekile ukuthola lokho okudingayo eDunelm. Siphinde sigcwalise ukukhethwa okuningi kwezimpumputhe ezinhlobonhlobo zezinto zokwakha. Izindwangu zethu ezingabonakali izindwangu kungenzeka ukuthi zithandwa kakhulu, kodwa izimpumputhe zepulasitiki, zensimbi nezokhuni ziyatholakala.
● Kulula ukuyigcina:
Idalwe kusuka ku-polyester futhi itholakala ezinhlobonhlobo zemibala - kufaka phakathi okumhlophe, ukhilimu kanye no-grey blinds blinds zethu zibukeka kalula. Mane nje usongeze isiponji noma usule ngendwangu ethambile ukuze ubuyisele izimpumputhe zakho zewindows zibheke phezulu. Lokhu kubenza balunge njengamakhampasi asekhishini, lapho izikhala kanye nokuchitheka kungasulwa kalula. Izimpumputhe zensimbi ezibheke phezulu zensimbi nazo zigqoka kanzima nokulungiswa okuphansi.
● Ukuphepha kuqala:
Emakhaya emindeni kubalulekile ukuqonda ukuphepha okungaboni, ikakhulukazi ezindaweni ezisetshenziswa yizingane ezincane. Ochwepheshe bethu bokugqoka amafasitela bangakucebisa ngobumpumputhe obufanele kakhulu kuwe, kanye nokuchaza ukubaluleka kwamadivayisi okuphepha ezintambo.
Ngemininingwane engaphezulu kokufaka ngokuphephile izimpumputhe ekhaya lakho, funda Umhlahlandlela Wokuphepha wethu ongaboni. Ngemininingwane engaphezulu kwengubo yamawindi, sicela ubheke imihlahlandlela yethu yezeluleko zesazi. Dlulisa amehlo kuhlu lwethu oluphelele lwezimpumputhe ezithe mpo bese uthola okulungele ikhaya lakho.
● Ukusetshenziswa kwe-blinds eqondile
Ama-Vertical Blinds asetshenziswa kahle e-Café, eSikoleni, eKhaya, Endaweni Yezentengiso, ezitolo, efulethini, esibhedlela nakuzo zonke ezinye izindawo ze-pubic. AmaRoller blinds asebenzisa ingaphakathi noma ingaphandle. Kususelwa ekukhethweni okungapheli kwezinto ezibonakalayo ezimpumputhe nezinhlelo.
Esedlule: Izimpumputhe zaseVenetian
Olandelayo: Readymade Zebra Blind